सरकारलाई मिर्गौलापीडितको प्रश्न-भैंसी बेचेर कहिलेसम्म उपचार गरुँ ?::Radio Chhahari
सरकारलाई मिर्गौलापीडितको प्रश्न-भैंसी बेचेर कहिलेसम्म उपचार गरुँ ?
म्याग्दी – बाबियाचौर–३ खुम्ल्याका योगनाथ शर्माले गोठमा पालेको भैंसी बिक्री गरेर श्रीमतीको उपचारमा खर्च गरे। एक वर्षअघि ५० वर्षीया श्रीमती टीकाकुमारीको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उपचारमा उनले घरमा भएको पशुचौपाया बिक्रीका साथै आफन्त र छिमेकीबाट दुई लाखभन्दा बढी ऋण लिए।
विपन्न परिवारका शर्माले पशुचौपाया र अन्नपात बेचेर समेत श्रीमतीको उपचारमा खर्च गरे पनि उपचार पूरा हुन सकेको छैन। ‘अब एउटा भैंसी र खेतका केही फोटा बाँकी छन्। ती पनि बेचेर उपचार प्रयास गरिरहेको छु’, शर्माले भने। आजको नागरिकमा खबर छ ।
ऋण दिएका साहुले समेत ताकेता गर्न थालेपछि समस्या थपिएको उनले गुनासो गरे। ‘अस्पतालमै पैसा सकिएपछि थप उपचार नै छोडेर घर फर्किएँ। अहिले उपचारमा सहयोग खोजिरहेको छु’, उनले भने।
छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका साथै घरायसी खर्च चलाउन समेत मुस्किल भएको बताउँदै उनले सहयोगको याचना गरेका छन्। ‘सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क सेवा खोज्न जाँदा स्वास्थ्यकर्मी हप्काउँछन्। तीनपटक डायलासिससमेत ऋण खोजेर गरें’ शर्माले भने। सरकारले नागरिकलाई सातामा तीनपटकसम्म निःशुल्क डायलासिस सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
‘टिभी र रेडियोमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको निःशुल्क सेवासम्बन्धी भाषण धेरै सुनियो तर उनले बोलेअनुसार सेवा प्राप्त गर्न सकिएन’, उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘गरिब जनताका लागि कहिले बन्छ सरकार? कहिले हुन्छ सहज सुविधा?’ उनले पत्नीको उपचारमा २ लाख १५ हजारभन्दा धेरै खर्च गरिसके।
मिर्गौला प्रत्यारोपणसहितको सेवासुविधामा अझै खर्च हुने भन्दै रकम जुटाएर आउन चिकित्सकले अनुरोध गरेपछि घरमा फर्किएको शर्माको भनाइ छ। शर्माले पत्नीलाई प्रत्यारोपणका लागि आफ्नै एउटा मिर्गौला दिने भएका छन् तर खर्च अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।